Kwimashishini yaseRussia ebonisa ukuba kukho abalinganiswa abaninzi abaxhaphaza ngamaxesha abo ama-antics anonya. Yintoni, ukuthetha okanye izifo? Masizame ukuqonda.
UFilipu Kirkorov - ukumkani we-PR kunye neentlanzi
"U-King" wendawo yasekhaya, uFilip Kirkorov, wabonwa ngaphezu kweyodwa ngokuziphatha okungonelanelekanga. Intsimbi yokuqala yabhala kwinkomfa yenkomfa eRostov-on-Don, xa uKirikorov ngokukhawuleza wahlasela intatheli u-Irina Aroyan ngokuhlambalaza, ebuza umbuzo ongeyithandeki inkwenkwezi.
Le meko "ngefreyinki" ebomvu ibangela ukugwetywa okukhulu kumaphephandaba, kodwa, ngokusobala, akazange afundise umculi oye wahamba kakhulu.
Kwiminyaka emithandathu kamva, ekuhlaziyeni kweGreen Gramophone uFilipu wahlasela umlawuli ongumncedisi uMarina Yablokov, obangela umonakalo emzimbeni kuye. UKirikorov wachaza lo msebenzi ngokuhlaselwa okubuhlungu komsindo, ukuphelisa imiphumo eyayijika ngayo kwiinkonzo zeengcali ze-Israel.
Kwimeko nayiphi na into, abaxhamli beenkwenkwezi mabayeke kude ne-bully-long-bully-long bully kwaye musa ukukhupha inkwenkwezi ngemibuzo ekhohlisayo.
UAlexandro Domogarov - uyayithanda kwaye uyabetha
Enye, ngelishwa, iqela elikhulu le-macho elisekhaya limelelwe ngabathandi bexesha elikhawulezayo ekujongeni ibhotile, kwaye ngoko, bekhulile, balungise ukuxoshwa kunye nabafazi babo. Kule nto, kubalulekile ukukhankanya umlingisi uAlexander Domogarov, ongu-"Shakespeare" onomdla, uhlasele rhoqo umfazi wakhe owayengumfazi uNatalie Gromushkin.
Umamakazi u-Domogorova, unina womfazi wakhe wokuqala u-Irina, uchaza ukuziphatha okungafanelekanga komdlali wezobuqhetseba, okwakubangela u-Domogorov Gromushkin, ekhokela ngaphandle kwentsapho. Ingxaki efanayo yavela ngobudlelwane bukaAlexander noMarina Alexandrova.
Nangona uthando oluvuthayo olwenziwe phakathi kwabadlali, uMarina naye wabonakala kwinqanaba ngeenxeba ezingaphezu kwesinye isihlandlo.
Alexei Panin: ubomi bubuhlungu
Kodwa umthi wesundu kule ngqungquthela yokutshatyalaliswa kweentlanzi zeenkwenkwezi kungowomdlali we-Alexei Panin. Ngenxa yeengxabano eziqhubekayo kwiehotele nakwiivenkile, wayebizwa ngokuba ngu "gastronomic rowdy".
U-Alex uyakuthanda ukukhupha ngeenqwelo, ukuchazela ngentsholongwane. Umfazi wangaphambili waba ngu-neurasthenic ngenxa yokwesaba rhoqo intombi yakhe, apho uPanina wakwazi ukuphanga ngezikhathi ezithile.
Ewe, iimeko zokugqibela nge "Inja yenja" zenze i-resonance enjalo kangangokuthi nabalandeli abaninzi abazinikeleyo bajika umdlali.
U-Alena Shishkov wabanjwa emva kokumanga noAndrei Chadov
Isifuba sesifuba senkukhu
Indlela yokusinda kwindawo yokushisa kwisixeko?
Iindawo eziqhelekanga zokulala ngesondo